जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको पुनर्गठन गर्ने विधेयक पेश भएको छ । यो वास्तवमै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना हो । तर राज्यसभामा पेश गरिएको विधेयकमा विचार विमर्श गर्न समय नै दिइएन । त्यसैले जसरी कश्मीर बन्द छ, त्यसरी नै संसद पनि बन्द छ ।
सडकमा ढोल–नगरा बजिरहेको छ । कसैलाई के भएको हो थाहा छैन, कसरी र किन भयो भन्ने पनि थाहा छैन । केवल एक लाइन मात्रै थाहा छ, जुन वर्षौंदेखि थाहा थियो ।
राष्ट्रपति राज्यपालको सहमतिमा भएको बताउँछन् । राज्यपाल आफूलाई दुई दिन अघिसम्म केही थाहा नभएको बताइरहेका थिए । भोलि के हुन्छ थाहा छैन । राज्यपाल केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि हो । राष्ट्रपतिले केन्द्रको रायलाई नै राज्यको राय बताइदिए । हस्ताक्षर गरिदिए ।
जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अब राज्य रहेन । तिनलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरियो । राज्यपालको पद समाप्त भयो । मुख्यमन्त्रीको पद समाप्त भयो । राजनीतिक अधिकार र पहिचान काँटछाँट हुँदैछन् । इतिहास बन्दै छन् ।
बाँकी भारत खासगरी उत्तरभारतमा धारा ३७० प्रति आफ्नै बुझाई छ । त्यो के हो ? र किन छ ? भन्ने कुराको मतलब छैन । त्यो धारा हट्यो । त्यसैलाई लिएर उत्सव छाएको छ । यसको दुई वटा प्रावधान हट्यो र एक प्रावधान बचेको छ । त्यो पनि हट्न सक्छ, तर अब त्यसप्रति कसैको मतलब छैन ।
उत्सव मनाउनेहरूबीच एउटा कुरा प्रष्ट छ कि उनीहरूलाई अब संसदीय प्रक्रिया र नियमावलीहरूमा कुनै आस्था छैन । उनीहरूलाई न्यायपालिकाको पर्वाह छैन । न उनीहरूलाई विधायिकाहरूको नै पर्वाह छ । संस्थाहरूको चिन्ताको प्रश्न मृत घोषित् गरिएको छ । तिनीहरूले अमरत्व प्राप्त गरिसके । यो अध्याँरो होइन, अत्याधिक उज्यालो हो । यस्तो बेला आवाज धेरै सुनिन्छ, र देखिन्छ कम । लोकले लोकतन्त्रलाई खारेज गरिदिएको छ । निराश हुनु जरुरी छैन ।
मानिसहरूले आफ्नै बीचमा कसैलाई शत्रुको रुपमा भेटेका छन् । कहिले त्यो शत्रु मुसलमान भइदिन्छ, कहिले कश्मीरी भइदिन्छ । घृणाका थुप्रै सूत्रहरूले मानिसको ‘प्रोग्रामिङ’ गरिसकिएको छ । अब केवल देखिने शब्दको जरुरी छ, जसले समान रुपमा प्रतिक्रिया जनाउने छ ।
धारा ३७० लाई लिएर सबैले राजनीति गरेका छन् । भाजपा भन्दा पहिला काँग्रेसले यसको दुरुपयोग गरेको थियो । धारा ३७० रहँदै उसले आफ्नो मर्जी चलाएर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो । यो खेलमा राज्यका राजनीतिक दलहरू पनि सहभागि छन् । उनीहरूको असफलतालाई नै धारा ३७० को असफलता बताइयो । कश्मीरको समस्यालाई अत्याधिक रुपमा बेरेबार गरेर झुण्ड्याइयो ।
यसमा सबैभन्दा धेरै गोलमाल भाजपा आउनुभन्दा पहिल्यै भयो । भाजपाले पनि राजनीति गरेका थिए, तर खुलेर भनेका थिए– यो धारा हटाइदिन्छौं । उनीहरूले ३५–ए त हटाइदिए, तर धारा ३७० हटाउँदा राज्य नै समाप्त गरिदिन्छौँ भनेका थिएनन् ।
यो प्रश्न त अवश्य हो तर जसको लागि हो उनीहरूलाई यसप्रति कुनै मतलब छैन । नोटबन्दीको समयमा भनिएको थियो कि आतंकवादको कम्मर भाँचिनेछ । त्यसो भएन । आशा गरौं यस पटक कश्मीरको अवस्था सामान्य होस् ।
अब त्यहाँका मानिसहरूसँग छलफलको त गुन्जायस नै छैन । सबैको लागि एकै नापको स्वीटर बुनिएको छ, जुन पहिरिनै पर्नेछ । राज्यको फैसला भइसक्यो, राज्यलाई नै खबर छैन ।
कश्मीरका पण्डितहरूमा हत्या र विस्थापनको घाउ आज पनि दुखिरहेको छ । त्यसलाई कसरी सान्तवना दिने भन्ने कुनै योजना छैन । तपाईं यो भन्न सक्नुहुन्न कि कुनै योजना छैन । किनकी कसैलाई केही थाहा छैन । यो त्यस्तो प्रश्न हो जसले सबैलाई निरुत्तर बनाउँछ ।
कश्मीरी पण्डितहरू खुशी छन् । घाटीमा आज पनि हजारौँ कश्मीरी पण्डितहरू छन् । त्यस्तै हजारौँ संख्यामा सिखहरू पनि छन् । यिनीहरूको अनुभव के छ, कश्मीरको विमर्शमा यिनीहरूका कुनै कथा छैनन् । हामीलाई थाहा छैन ।
अमित शाहले धारा ३७० लाई काश्मीरको प्रत्येक समस्याको कारण बताए । गरिबीदेखि लिएर भ्रष्टाचारसम्मका कारण धारा ३७० नै भएको उनको दाबी छ । आतंकवादलाई त यसै पनि भनिएकै थियो ।
कश्मीरमा अब रोजगारी सिर्जना गरिने, उद्योग धन्दा खोलिने बताइएको छ । यस्तो लागिरहेको छ कि १९९० को आर्थिक उदारीकरण यतिबेला कश्मीरमा लागू भइरहेको छ । बेरोजगारी त यूपीमा पनि अत्याधिक छ । अब के यूपीलाई रोजगारी र उद्योगधन्दाको नाममा पाँच केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँडिदिने ?
कश्मीरमा एउटा अस्थायी प्रावधान हटाएर अर्को अस्थायी प्रावधान लागू गरिएको छ । अमित शाहले भनेका छन् कि परिस्थिति सामान्य भएपछि फेरी राज्य बनाइन्छ । अर्थात् सधैंको लागि दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनेको होइन ।
यो प्रष्ट छै कि परिस्थिति सामान्य भएपछि फेरि पहिलेकै स्थितिमा ल्याइन्छ कि केवल जम्मू–कश्मी राज्य बनाइन्छ । यतिबेला परिस्थिति त्यस्तो के भएको थियो जसकारण राज्यको दर्जा नै समाप्त गर्नुपर्‍यो ?
आशा गरौं कश्मीरमा कर्फ्र्युको अवधि नलम्बियोस् । परिस्थिती सामान्य होस् । कश्मीरका नागरिकको आपसी सम्पर्क टुटेको छ । जो कश्मीरदेखि बाहिर छन्, उनीहरूको परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितीमा उत्सव मनाउनेहरूलाई हृदयले भन्छ– हामी किन चुक्यौं ?
एउटा भीड छ जो भनिरहेका छन् कि तपाईं स्वागत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? स्वयं भाजपा धारा ३७० को विरोध गर्ने जनता दल युनाइटेडको साथ अप्ठ्यारो सहकार्यमा छन् । विरोधका बाबजूद पनि जेडीयू सरकारमा छ ।
प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने बित्तिकै गाली दिनेहरूको दस्ता तपाईंमाथि खनिने छ । कश्मीरमा जमीन खरिद गर्न पाउने भएकोमा खुशी मनाउने हो भने अरु राज्यहरूबाट पनि यस्तो प्रावधान हटाउने माग गर्नु आवश्यक छ ।
आदिवासी क्षेत्रहरूमा पनि यस्तो माग गर्नु आवश्यक छ जहाँ पाँचौ अनुसूचीले जमीन खरिद गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यहाँ पनि यस्तो प्रावधान नहटाइएसम्म भारत एक हुन सक्दैन भन्ने नारा लगाउनु आवश्यक छ ।
त्यसो हो भने के एक भारतको माग गर्नेहरूले यो नारा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पनि लगाउनेछन् या कश्मीरको विषयमा मात्रै सीमित रहन्छन् ? तरिका त पक्कै राम्रो भएन, आशा गरौं नतिजा राम्रो आओस् । तर नियत ठीक छैन भने नतिजा कसरी राम्रो आउन सक्छ ? कश्मीरले यसको कडा मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।
कश्मीरलाई बाँकी भारतको आधा अधूरो जानकारीको कोपभाजनमा पर्नु नपरोस् । के यस्तो हुन सम्भव छ ? कसैलाई केही थाहा छैन । यतिबेला कश्मीरी जनताको चिन्तालाई बुझ्नु आवश्यक छ । उनीहरूलाई अँगाल्नु आवश्यक छ ।
यदि तपाईंहरूलाई कसैले उनीहरूको छोरी–बुहारीमाथि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न सोध्छ र तपाईं आफूले मनाइरहेको उत्सवप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भने त्यो प्रश्न सोध्नेलाई भन्नुपर्छ कि यस्तो मानसिकताको लागि तपाईंको उत्सव कसरी शानदार हुनसक्छ ?
उत्सव मनाइरहेका मानिसहरूको हृदय पक्कै ठूलो छ । उनीहरूसँग प्रायोजित झुठ र अन्यायहरूसँग मुन्टो फर्काएर हिँड्ने साहस छ । तर्क र तथ्य महत्वपूर्ण होइन, न जरुरी छ । किनकी मानिसहरू जे सुन्न चाहन्छन् त्यहि भनिएको छ । अधिकांशले भनेका छन् कि कश्मीर एउटा भीडको ट्रिगर बन्न सक्थ्यो, त्यसैले ऊ चुप बस्नुपर्छ ।
इतिहासको एउटा कारखाना खुला छ । त्यहाँ कस्तो इतिहास बनेर बाहिर आउँछ कसैलाई थाहा छैन । जहाँ इतिहास बन्दै छ त्यहाँ मौनता छाएको छ । जहाँ उत्सव चलिरहेको छ त्यहाँ कसैलाई केही मतलब छैन । जब मतलब हुन थाल्छ, त्यो मतलब इतिहासले आफ्नो हिसाबअनुसार बनाउँदछ ।
सदनमा अमित शाहले भने– कश्मीर नेहरूले नेतृत्व गरिरहेका थिए, सरदार पटेलले होइन । यो इतिहास होइन, तर अब इतिहास हुनेछ । किनकी त्यो अमित शाहले भने । उनीभन्दा ठूला इतिहासकार यतिबेला अरु कोही छैनन् ।
नोटः चुट्किला बनाउनेहरूलाई बताउनुस् कि कश्मीर एक गम्भीर विषय हो । यो पेन्सनको विषय होइन । यिनीहरू र अश्लील सन्देश पठाउनेहरूमा कुनै फरक छैन । दुवैलाई कश्मीरको जनतासँग मतलब छैन ।
(यो लेख भारतीय वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमारको फेसबुक पेजमा प्रकाशित सामाग्रीको भावानुवाद हो ।)
–प्रस्तुतीः सुमनराज श्रेष्ठ